देशभर कोरोना त्रास, शितलनिवासमा आज रात्रिभोज, को को हुँदैछन् सहभागी ? – Jagaran Nepal
देशभर कोरोना त्रास, शितलनिवासमा आज रात्रिभोज, को को हुँदैछन् सहभागी ?
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज साँझ सबै पार्टीका शिर्ष नेताहरूलाई शितल निवासमा बोलाएकी छिन्। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका प्रमुख नेताहरुलाई साँझ चियापानसहित सामूहिक छलफल गर्नेगरि राष्ट्रपतिले बोलाएकी हुन्।
शितल निवास स्रोतकाअनुसार समसामयिक विषयमा दलका नेताहरूसँग राष्ट्रपतिले कुराकानी गर्न लागेकी हुन्।
को को हुँदैछन् सहभागी ?
रात्रिभोजका लागि उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश,सभामुख, राष्ट्रीय सभा अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, खिलराज रेग्मी, लोकेन्द्रबहादुर चन्द, शेरबहादुर देउवासहित सयभन्दा बढी निम्तालुलाई निम्तो गरिएको बताइएको छ।
भोजमा सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटीका सबै सदस्य तथा अन्य नेताहरुलाई निमन्त्रणा गरिएको छ। यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षदलका केही नेतालाई पनि बोलाइएको छ।
सत्तारुढ दल नेकपाको स्थायी समितिको बैठक बसेको बेला आयोजना भएको रात्रिभोजलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। विभिन्न बिषयमा विवाद रहेका बेला प्रधानमन्त्रीको पक्षमा वातावरण बनाउँनेगरि रात्रिभोजको आयोजना गरिएको बुझिएको छ।
साँझको कार्यक्रममा सहभागी हुने नेताहरुका लागि खानपिनका परिकारको अर्डर गरिसकिएको छ। सरकारले लकडाउनको यो समयमा विवाह, ब्रतबन्ध तथा पूण्यकार्यमा बढीमा १५ जना भन्दा मानिस भेला हुन नपाइने नियम जारी गरेको छ।
यदि भेला भएमा आयोजक वा व्यवस्थापक (पार्टी प्यालेस) लाई जरिवाना गराउनेदेखि हिरासतमा राख्नेसम्मका प्रावधान तय गरेको छ। तर, त्यसकै खिलाप राष्ट्रपति कार्यालयले रात्रिभोजको आयोजना गर्न लागेको हो।